Fampanantenana vaovao sy fambolena ‘artemesia’ ary ‘essai clinique’ amin’ny CVO - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Toy ny fanaony isaky ny tapitra ny tapa-bolana
analavana ny fahamehana ara-pahasalamana
dia miteny amin’ny
fampitam-baovaom-panjakana TVM sy RNM
ny filoham-pirenena, Andry Rajoelina,
ary raisin’ireo televiziona sy radio tsy miankina
koa ho fampiharana ny ‘réquisition’.
Tamin’ny alahady 3 mey teo,
dia tamin’ny 8 ora sy 17 minitra no nanomboka ny fotoana
izany hoe mba 17 minitra ny fahatarana.
Mpanao gazety telo avy amin’ny TVM, VIVA ary TV Plus
no nitafa taminy.
Tamin’io alahady io àry,
ao anatin’ny 15 andro fahefatra
amin’ny fahamehana ara-pahasalamana
(mitohy ireo fepetra takian’izany),
araka ny fanapahan-kevitra
tamin’ny filan-kevitry ny minisitra tamin’ny 2 mey,
dia anisan’ny nasongadin’ny filoha Rajoelina ireto zavatra ireto :
fananganana ozinina lehibe fanaovana fanafody hiarahana amin’ny any ivelany afaka iray volana, fambolena ‘Artemisia’ izay hampidi-bola be satria 3000 dolara ny taonina aminy raha 350 dolara ny an’ny vary,
fanaovana ‘essai clinique’ amin’ny herinandro io amin’ireo marary vaovao tratry ny ‘covid-19’ amin’ny alalan’ny ‘injection’ fa tsy tambavy intsony,
fanorenana foibe fitsaboana ny aretina homamiadana lehibe indrindra aty Afrika,
ary famoahany ireo mpanao gazety mety ho diso lalana noho ny fanamarihana ny andron’ny fahalalahan’ny asa fanaovan-gazety. Momba ity farany, dia navoaka ny fonjan’Antanimora ny alatsinainy 4 mey ny talen’ny famoahana ny gazety Ny Valosoa, Arphine Rahelisoa, izay nampidirina teny tamin’ny 4 aprily 2020. Nangataka fahafahana vonjy maika izy tamin’ny 9 aprily fa tsy nahazo. Ny filohan’ny holafitry ny mpanao gazety eto Madagasikara, Rakotonirina Gérard, tamin’ny andro namoahana ity mpanao gazety ity am-ponja dia nanamarika fa anisan’ny niadian’ny minisitry ny Serasera sy ny Kolontsaina ny tsy hamonjana mpanao gazety noho ny fanehoan-keviny fony izy tsy mbola minisitra, kanefa dia tsy araka izany ny nataony rahefa lasa minisitra izy. Adihevitra mitohy any anivon’ny haino aman-jery samihafa sy ny tambajotra sosialy ny momba izany rehetra izany.
Fa ao anatin’ny fahamehana ara-pahasalamana ihany dia mitondra fanazavana hatrany momba ny CVO ireo manam-pahaizana amin’ny fahasalamana, halefa amin’ny TVM sy RNM ary ireo televiziona sy radio tsy miankina. Anisan’ny nitondra fanazavana momba izany ny Profesora Rafatro Herintsoa, mpahay fanafody tamin’ny 4 mey teo. Novelabelariny ny dingana atao momba ny famoahana fanafody ka ho azo amidy, ao anatin’izany ny fahazoan-dalana atao hoe AMM sy ny fisian’ny mombamomba ilay fanafody. Hatreto, hoy izy, dia tsy mbola misy famaritana mazava momba ny singa ao amin’ilay CVO izay anjaran’ny ‘Agence de médicament’ no milaza azy. Momba ireo CVO nalefa any amin’ireo firenena afrikanina, dia nomarihany fa ‘DON’ na fanomezana ireny. Ankoatra izany dia manantitrantitra hatrany ireo manam-pahaizana miteny ny maha zava-dehibe ny fanarahana ny fihetsika fototra hisorohana ny fahazoana ny tsimokaretina, amin’ny fanasana tanana amin’ny rano sy savony na ‘gel désinfectant’ sy fanaovana aro vava sy orona na ‘masque’, ary ny fanajana ny elanelana iray metatra eo amin’ny olona mifamoivoy.
Nitohy ny fanarahana fotoam-bavaka tamin’ny haino aman-jery noho ny tsy mbola fisokafan’ny fiangonana rehetra. Ho an’ny EKAR tamin’ny alahady 3 mey 2020, dia niainga hatrany tao amin’ny katedraly Andohalo ny lamesa tsy natrehan’ny mpino fa nampitaina tamin’ny radio sy televiziona IBC, notarihin’i Mgr Pascal Andriantsoavina. Nanao ny azy toy ny mahazatra isan’andro ny Radio Don Bosco (RDB) sy ny radion’ny diosezy.
Maneran-tany dia efa manomboka mihena ny isan’ny maty isan’andro na dia mbola mitombo aza ny isan’ireo tratry ny tsimokaretina, ary miroso miandalana amin’ny fialana amin’ny fihibohana ny firenena maro. Maherin’ny 3,5 tapitrisa no tratry ny tsimokaretina ‘covid-19’ tamin’ny 4 mey (maherin’ny 3 tapitrisa tamin’ny 28 aprily) ; maherin’ny 248 000 kosa ireo namoy ny ainy (210 000 tamin’ny 28 aprily). Anisan’ny be maty indrindra hatrany, raha ny isa tamin’ny 4 mey, i Etazonia (maherin’ny 67 000), Italie (maherin’ny 28 000), Espagne (maherin’ny 25 000), France (manakaiky ny 25 000) ary Grande Bretagne (manakaiky ny 29 000).
Ho an’i Madagasikara, araka ny fampitana nataon’ny Profesora Vololontiana Hanta Marie Danielle mpitondra teny ofisialy momba ity ‘covid-19’ ity dia 158 no nambara fa tratry ny tsimokaretina ary 101 no sitrana tamin’ny 6 mey 2020 raha 128 herinandro talohan’izay ary 75 no sitrana. Miisa 3907 ireo fitiliana natao hatramin’ny 5 mey, ary tsy misy ny aina nafoy.